Ciidamada Itoobiya oo ku dagaallamay magaalada Halgan.
Sunday December 06, 2020 - 08:41:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya magaalada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka dagaal uu halkaas ku dhexmaray ciidamo kawada tirsan milatariga Itoobiya.
sawir hore ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugan Hiiraan
Dagaalka ayaa qarxay abaara 6:30 subaxnimo kadib markii ciidamada Itoobiyaanka ay isku dayeen in ay hubka ka dhigaan qaar ka tirsan askarta xerada ku sugan kuwaas oo amar diido sameeyay kadib dagaal ka bilaabay xerada gudaheeda.
Rasaas culus ayaa in muddo ah ka socotay gudaha xerada ciidamada Itoobiyaanka ah ee magaalada Halgan, waxaana lasoo sheegayaa in halkaas uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Lama oga sababta ay ciidamada Itoobiyaanku hubka uga dhigayeen askarta saaxiibadooda ah ee xerada kula sugan balse arinkaan ayaa la aaminsanyahay in ay ku lug leedahay dagaallada ka socda gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya.
Dawladda Itoobiya ee uu hogaamiyo Abey Axmad ayaa tan iyo markii uu bilawday dagaalka ka dhanka ah maamulka Tigreega waxay bilawday ugaarsi ay ku hayso saraakiisha iyo ciidamada Itoobiyaanka ee kasoo jeeda qawmiyada Tigreega ah.
Boqolaal saraakiil iyo askar Tigree ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa xilalkii iyo hubkii laga qaaday kuwaas oo uu badankood lagu dhex xiray saldhigyada ciidamada halka qaar kalena loo qaaday xabsiyo ku yaalla gudaha Itoobiya.